ဆင်ဟွာသတင်းအေဂျင်စီ တည်ထောင်ခြင်း နှစ် ၉၀ ပြည့် အခါသမယအတွက် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်ပမီဒီယာများက ဂုဏ်ပြုသဝဏ်လွှာများ ပေးပို့ - Xinhua News Agency
ဆင်ဟွာသတင်းအေဂျင်စီ တည်ထောင်ခြင်း နှစ် ၉၀ ပြည့် အခါသမယအတွက် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်ပမီဒီယာများက ဂုဏ်ပြုသဝဏ်လွှာများ ပေးပို့
တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့ရှိ ဆင်ဟွာသတင်းအေဂျင်စီ ရုံးချုပ်အား ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လက တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း၊ နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက် (ဆင်ဟွာ)
နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်ပအစိုးရအေဂျင်စီများနှင့် မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများက ဆင်ဟွာသတင်းအေဂျင်စီ (Xinhua News Agency) တည်ထောင်ခြင်း နှစ် ၉၀ ပြည့် အခါသမယအတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြောင်း၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အောင်မြင်မှုများအတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ကတိပြုခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
၎င်းတို့အနေဖြင့် ဆင်ဟွာအား ရိုးသား၊ နွေးထွေးစွာဖြင့် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မှုများကို ပေးပို့ပါကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အပြောင်းအလဲမြန်ဆန်လျက်ရှိသော ကမ္ဘာကြီးအကြောင်း စာဖတ်ပရိသတ်များအား သတင်းတင်ပြပေးသည့် ကောင်းမွန်သောအလုပ်ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းအပေါ် သဝဏ်လွှာများ၌ မှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြသည်။
ဆင်ဟွာသည် ယုံကြည်၊ စိတ်ချရပြီး ထိရောက်သော သတင်းအချက်အလက် အရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ် ချီးကျူးပြောကြားလျက် အေဂျင်စီအနေဖြင့် ပြည်သူ့အသံကို ဖော်ပြခြင်းနှင့် အရည်အသွေးပြည့်မီသော သတင်းထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းအတွက် အမြဲတစေ မြှုပ်နှံထားလျက်ရှိကြောင်း ၎င်းတို့က ဆိုသည်။
ဆင်ဟွာသည် ကမ္ဘာ့စင်မြင့်ပေါ်တွင် လွှမ်းမိုးမှုရှိသော မီဒီယာကြီးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း၊ သမားရိုးကျနှင့် ခေတ်မီနည်းပညာများ အသုံးပြုလျက် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ စာဖတ်ပရိသတ်များ အမြောက်အများထံသို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ နည်းပညာသစ် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို စဉ်ဆက်မပြတ် ကတိပြုထားခြင်းနှင့်အတူ ပြောင်းလဲနေသော မီဒီယာကမ္ဘာနှင့် ထိန်းသိမ်းရာတွင် အခြားသောမီဒီယာများအကြား ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ၎င်းတို့က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
ဆင်ဟွာနှင့် ၎င်းတို့ကြား ကာလရှည် ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းထားမှုကို အလေးထားပြောကြားလျက် ၎င်းတို့အနေဖြင့် ဆင်ဟွာသတင်းဌာနနှင့် နယ်ပယ်မျိုးစုံ၌ လုပ်ကိုင်ရာတွင် လွန်စွာကျေနပ်မှုရှိကြောင်းနှင့် ကာလရှည် အကျိုးကျေးဇူးရှိသော ပူးပေါင်းရွက်မှုများ အားကောင်းလာစေရန်နှင့် တိုးတက်မှုရှိစေရန် မျှော်လင့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆင်ဟွာအနေဖြင့် Agence France-Presse ၊ Al Jazeera Media Network ၊ Italian news agency ANSA ၊ German news agency dpa ၊ Korean Central News Agency ၊ Middle East News Agency ၊ Prensa Latina ၊ Reuters ၊ Rossiya Segodnya ၊ South Africa’s Independent Media Ltd., TASS ၊ The Associated Press ၊ Vietnam News Agency ၊ Yonhap News Agency နှင့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မီဒီယာအုပ်စုများထံမှ ဂုဏ်ပြုသဝဏ်လွှာ စုစုပေါင်း ၁၄၈ စောင် လက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဆင်ဟွာသတင်းအေဂျင်စီသည် တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ကျန်းရှီးပြည်နယ်၊ Ruijin မြို့တွင် Red China News Agency အဖြစ် ၁၉၃၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်၌ စတင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း ဆန်ရှီးပြည်နယ် Yan’an မြို့ တော်လှန်ရေးအခြေပြုချိန် ၁၉၃၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ၌ ဆင်ဟွာ သတင်းအေဂျင်စီ အမည်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယခုအခါ ဆင်ဟွာသည် ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပ၌ ရုံးခွဲ ၂၀၀ ကျော်ဖြင့် လည်ပတ်လျက်ရှိပြီး သတင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုအတွက် subscribe ပြုလုပ်ထားသည့်မီဒီယာအဖွဲ့အစည်း ၈,၀၀၀ ထံ ဘာသာစကား ၁၅ မျိုးဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့သလို ကမ္ဘာ့လူဦးရေး ထက်ဝက်ကျော်အား လွှမ်းခြုံလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Int’l institutions, foreign media congratulate Xinhua on 90th founding anniversary
BEIJING, Nov. 18 (Xinhua) — International institutions, foreign government agencies and media organizations have congratulated Xinhua News Agency on its 90th founding anniversary, expressed appreciation for its professional achievements, and pledged more cooperation.
Hailing Xinhua asareliable, credible and efficient source of information, they said the agency has always been dedicated to conveying people’s voice and providing quality news products and services.
A total of 148 congratulatory messages have been received from organizations and media groups worldwide, including Agence France-Presse, Al Jazeera Media Network, Italian news agency ANSA, German news agency dpa, Korean Central News Agency, Middle East News Agency, Prensa Latina, Reuters, Rossiya Segodnya, South Africa’s Independent Media Ltd., TASS, The Associated Press, Vietnam News Agency, Yonhap News Agency and United Nations organizations.
Xinhua News Agency started as the Red China News Agency in Ruijin, which is located in east China’s Jiangxi Province, on Nov. 7, 1931, and changed its name to Xinhua News Agency in January 1937 when it was in the revolutionary base of Yan’an,acity in northwest China’s Shaanxi Province.
Photo : Headquarters of Xinhua News Agency in Beijing, June 18, 2019. (Xinhua/Wan Xiang)